नेपाली पयर्टन क्षेत्रमा नयाँ पदमार्गको पहिचान : धौलागिरी स्यान्चुरी ट्रेक – Arthatantra.com
नेपाली पयर्टन क्षेत्रमा नयाँ पदमार्गको पहिचान : धौलागिरी स्यान्चुरी ट्रेक
काठमाण्डौं । नेपाली पर्यटनको क्षेत्रमा एउटा नयाँ पदमार्गको पहिचान भएकोछ । धौलागिरी हिमाल प्रथमको दक्षिणी आधार शिविरसम्म पुग्ने यो नयाँ पदमार्ग म्याग्दी जिल्लाको हो । धौलागिरी स्यान्चुरी ट्रेक नाम दिइएको यो पदमार्गको हिजो एक कार्यक्रमका बीचमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका छन् ।
शिकारी, गोठाला र यार्सागुम्बा टिप्न जानेहरुले हिँड्ने गोरेटो पच्छ्याउँदै नयाँ पदमार्ग अध्ययन गरिएको अध्येता सुरेन्द्र रानाले बताए। यो पदमार्ग पदमार्ग ४ हजार मिटर उचाइमा छ । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा सातदिन लामो नयाँ पदमार्ग खुलाएको संघका अध्यक्ष जीवनवहादुर विश्वकर्माले बताए।
काठमाडौंबाट पदयात्रामा निस्कनेहरुले बेनी, झीं, घ्यासिखर्क, फेदी, ओडार क्याम्प, आधारशिविर र दग्नाममा बास बस्नुपर्ने हुन्छ । घ्यासिखर्क, बेनी र फेदीमा आउँदा र जाँदा नै रात बिताउनु पर्छ । यो नयाँ पदमार्गको छरीसम्म बस्ती छ । काठमाडौंबाट बेनीसम्म बसमा आउजाउ गर्न दुई दिन लाग्छ भने पदयात्रा गर्न ७ दिन लाग्ने जनाइएको छ।
उद्घाटन कार्यक्रमका अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा संघले धौलागिरी पदमार्गमा खिचिएका तस्बिर तथा भिडियोको समेत प्रदर्शनी गरेको थियो । धेरै पर्यटकले छोटो दुरीका पदमार्गको खोजी गरिरहेको अबस्थामा धौलागिरि सेन्चुरी पदमार्ग चाँडै लोकप्रिय हुने पर्यटन बोर्डका सिइओ दिपकराज जोशीले बताए।
२२ पुस २०७३, ११।००
गम्भिरता पुर्वक अनुरोध र निवेदन आए स्रोत देखाइदिउँला : ओली काठमाडौं । निवर्तान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले […]
लगानी सम्भाव्यताबारे छलफल गर्न चिनियाँ टोली राजधानीमा काठमाडौ। लगानीको वातावरण तथा अवसरबारे जानकारी लिने उद्देश्यले नेपालको साताव्यापी भ्रमणमा […]
चिलिमेले बनायो खुद ५६ करोड नाफा काठमाण्डौं । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले तीन करोड रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । […]
२२ लाखले नारायणहिटी संग्रहालय अवलोकन गर्दा १९ करोड आम्दानी ! काठमाण्डौं । सञ्चालनमा आएदेखि नारायणहिटी संग्रहालयबाट करिब १९ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन […]
नेपालमा पेट्रोल पम्प चलाउने भारतीय प्रस्तावलाई निगमको सैद्धान्तिक सहमति काठमाडौ । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सँग मिलेर नमुना पेट्रोल पम्प र […]
सरकारको असहयोग पछि जनतामाझ महाबीर पुन ! भक्तपुर । समाजसेवी महाबीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द«को निर्माणमा सरकारको असहयोग पछि […]